Isqurxinta Wejiga ee Guriga lagu Sameeyo: Cunnooyinka, Faa'iidooyinka, Talooyinka iyo Waxbadan! | Ragga Stylish
Ku dar nadiifinta wajiga ee guriga lagu sameeyo xoqistaada caadiga ah waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto waji nadiif ah oo caafimaad qaba, inaad gadhka leedahay iyo haddii kale.
Rag badan ayaa u maleynaya in soo bixiddu ay tahay wax aan macquul ahayn, laga yaabee in ereyga laftiisu u muuqdo mid isla weyn. Laakiin runtu waxay tahay inay shaqeyso. Maqaarka wajiga aad ayuu ugafiican yahay, tan iyo ayaa lagama maarmaan u ah soo saarista madaxyada madow iyo unugyada dhintay.
1 Faa'iidooyinka nadiifinta wajiga ee guriga lagu sameeyo
2 Goorma ayey tahay inaad wajiga ka nadiifiso?
3 Imisa jeer ayaad wajiga ka marin kartaa?
4 Qaxwada wajiga lagu nadiifiyo wajiga
5 Lemon Cusbada Guriga Lagu Sameeyo Oo La Miiro
Faa'iidooyinka nadiifinta wajiga ee guriga lagu sameeyo
Maaddaama maaddooyinka guud ahaan qof walba guriga ku haysto la isticmaalo (qaarkood xitaa horeyba waa loo isticmaalay sida aan gadaal arki doonno), faa'iidada ugu horreysaa waa taas lacag ku badbaadi xoqida qaaliga ah.
Si ka duwan synthetics, xoqida guryaha lagu sameeyo ayaa noo oggolaaneysa inaan xakameyno dhammaan walxaha. Tani way fududahay Ka fogow taabashada kiimikooyinka sababi kara cuncun iyo falcelinta kale ee maqaarka.
Labada xoqeys iyo dabiici ah ka hortag timaha soo galaya iyo garka cuncunka. Waxyaabahani waxay kala furaan timaha waxayna soo saaraan unugyada dhintay iyo waxyaalaha kale ee nijaasta ah, iyagoo dhiirrigeliya cusboonaysiinta maqaarka gadhka hoostiisa.
Goorma ayey tahay inaad wajiga ka nadiifiso?
Fiditaanka wajiga waa lagu dhaqmi karaa waqti kasta oo maalintii ah. Si kastaba ha noqotee, sameynta ka hor ama inta lagu jiro qubeyska ayaa kuu badbaadin doonta waqti. Taasina waa inaad wejigaaga ku dhaqdo biyo diirran si loo furo daloolada ayaa qayb ka ah u diyaargarowga dab-demiska. Si la mid ah in la dhammeeyo waa lagama maarmaan in la mariyo qoyaan.
Waxa loo arko muhiim inay tahay ha marin nooc kasta oo ka mid ah xoqista wejiga ka hor intaadan xiirin. Isku day inaad ku kala soocdo labadan ficil ee xanaaqa badan si aad ugu ogolaato maqaarkaaga inuu ka soo kabto inta u dhexeysa hal shay iyo tan kale.
Imisa jeer ayaad wajiga ka marin kartaa?
Si ka duwan waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo (moisturizer, concealer stick, iwm), xoqida wajiga looma isticmaalo maalin kasta. Toddobaadkiiba laba jeer ayaa loo tixgeliyaa sida ugu habboon ee xaaladaha badankood.
Toddobaadkiiba mar waa soo noqnoqoshada oo waliba shaqeyn karta. Markay tahay maqaarka wajiga, waxaa muhiim ah in lagu dadaalo sidii si fiican loo ogaan lahaa iyo in la ogaado daryeelka uu u baahan yahay iyo goorta. Tani waxay qaadan kartaa waqti, laakiin markii aad garato, nadaafaddaada nadaafadeed waxay noqon doontaa mid fudud oo ka xoog badan.
Qaxwada wajiga lagu nadiifiyo wajiga
Haddii aad jeceshahay qaxwada (gaar ahaan carafteeda), waad jeclaan doontaa xoqida wajiga ee guriga lagu sameeyo. Sidoo kale waa hab fiican oo dib loogu warshadeeyo qaxwada.
Qaxwada ayaa ah mid ka hortagta bararka iyo firfircoonida, laba hanti oo maqaarku wax badan ka faa’iidi karo haddii aad uga tagto daqiiqado yar adigoo ah maaskaro.
3 qaado oo kafee ah
1 qaado oo malab ah (ikhtiyaari ah)
Isku qas dhammaan walxaha ku jira baaquli illaa inta si fiican loo isku dhafayo. Ku mari mariinka wajiga qaxwada wajigaaga iyo qoortaada dhaqdhaqaaqyo deggan oo wareegsan.
Haddii aad gadh leedahay, tani waa goob mudan in lagu noolaado daqiiqad. Ujeeddada ayaa ah in la helo unugyada dhintay ee ku soo urura timaha wajiga hoostooda.
Ka xoq xoqida maqaarkaaga ilaa 3-4 daqiiqo kahor intaadan wajiga biyo ku dhaqin. Tuwaalka qalalan, adigoo ka taxaddaraya inaadan cadaadis badan saarin.
Nota: Haddii aadan wada isticmaalin, ku keydi qaboojiyaha weel wejiga dambe. Xaaladahaas oo kale isku dar ah ayaa lagu hayn karaa xaalad wanaagsan dhowr toddobaad.
Lemon Cusbada Guriga Lagu Sameeyo Oo La Miiro
Liinta iyo milixdu waxay sameeyaan koox weyn, mana aha oo kaliya markay timaado cabitaanka tequila. Labadan walxood ayaa jirka ka nadiifiya, nadiifiya oo jilciya maqaarka.
Xirmada wajiga ee guriga lagu sameeyo waxay leedahay astaamo lidka bakteeriyada. Sidan oo kale, way ku caawin kartaa ka ilaali finanka iyo cilladaha kale ee wejiga.
Sidoo kale waa fikrad aad u fiican haddii aad leedahay maqaar dufan leh, tan iyo liinta waxaa loo tixgeliyaa inay waxtar u leedahay ka saarista saliida badan.
1/2 liin dhanaan ah
Ku daadi liinta weel yar. Milix ku dar illaa inta dhumucda la doonayo laga gaarayo. Maaha inay ahaato mid dareera badan ama aad qaro weyn, in kasta oo ay tahay arrin shakhsi doorbidkiisa ah.
Isticmaal suufka suufka ah si aad ugu marisid maqaarkan wajiga iyo qoorta maqaarka wajiga lagu sameeyo. Sawir wareegyo yar yar illaa 2-3 daqiiqo.
Dib-u-qoydi saxanka isku-darka inta jeer ee loo baahdo inta lagu jiro waqtiga la cayimay.
Ku dhaq wejigaaga biyo diirran. Ka taxaddar in liin dhanaanta iyo milixdu aysan soo gaadhin indhaha. Isticmaal isla taxaddar marka aad qallajineyso, tan iyo tan waa inaan ku darnaa in maqaarku uu si gaar ah xasaasi ugu yahay xoogaa yar ka dib markii la sameeyo fuuq-baxa.
Xusuusin: Inkasta oo ay faa'iido leedahay, waxaa muhiim ah in aan loo isticmaalin liin aad u fara badan isku darka. Si loo hubiyo, isticmaal laba qaybood oo milix ah mid kasta oo liin ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Nadiifinta wajiga lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo
Waa maxay maqaal aad u wanaagsan, marwalba waxaan baarayaa maalin kasta habka ugu wanaagsan ee loo nadiifiyo loona daryeelo maqaarka wejigayga, iyada oo ah caarad dheeri ah oo aan ku sii wadoyo daryeelka wajigeena xitaa marka aan seexanno, barkimo xiir wanaagsan si loo yareeyo nabarrada iyo finanka wajigeena, ma aaminsani ilaa aan go’aansaday inaan mid iibsado, wax badan ayey i caawisay, midkaan waxaan ka iibsaday Luxybear waana jeclaaday!